Vaovao - Taorian'ny fandrarana ny plastika dia amidy amidy 100% ny sakaosy biodegradable!
Momba ny fandrarana ny plastika, inona no tokony hampiasaintsika? Eto ny kitapo azo ovaina! Niala tsikelikely tamin'ny fampiasana azy ny vokatra plastika, ary ny akora biodegradable vaovao dia hisolo ny vokatra plastika ho vokatra vaovao mifandraika amin'ny tontolo iainana.
Ny kitapo biby fiompy dia vita amin'ny starch mais sy fitaovana PBAT, izay azo zahana 100%. Ny fototry ny kitapo fako dia simba ary manana interface breakpoint ho an'ny olombelona mba hidirana mora foana. Ny kitapo biby fiompy mora simba dia azo namboarina araka ny takiana.
Ny kitapo fako biby dia ampiasaina amin'ny seho mandehandeha alika isan-karazany. Azonao atao ny mampiasa azy ireo amin'ny zaridaina, lalana, zaridaina, ala ary toerana hafa. Rehefa avy voadona ilay alika tsy manoa dia makà horonan-taratasy 1 ary esory ny kitapo 1, tandremo ny fahadiovana ary arovy ny tontolo iainana.
Ny orinasa dia manolo-tena ho lasa orinasa sariaka tontolo iainana manompo an'izao tontolo izao! Niorina tamin'ny 2006, ny orinasa dia nifantoka tamin'ny vokatra bio-based sy compostable. Ao amin'ny indostria mandritra ny taona maro, azo antoka ny kalitaon'ny vokatra, ary misy ekipa matihanina aorian'ny fivarotana. Longjun dia orinasa misy orinasa 8, tsipika famokarana 7 ary milina mihoatra ny 50, miaraka amin'ny varotra 50 tapitrisa dolara amerikana isan-taona. Azo antoka fa ny baikon'ny mpanjifa rehetra dia azo atolotra ara-potoana. Ny ekipa dia manana ekipa mpivarotra matihanina hanomezana ny mpanjifa tsirairay serivisy tso-po sy avo lenta. Longjun Tianchun Environmental Protection Company dia manaiky ny fanodinana OEM, ODM an'ny mpanjifa mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa tsirairay. Azonao atao ny mametraka ny LOGO anao manokana, ny loko fanontana, ny haben'ny famaritana, ny fomban'ireo fonosana sns.